Madaxweyne Farmaajo maka dhabeyn doonaa ballanqaadkii uu sameeyay? - BBC News Somali
Image caption Farmaajo ayaa koldhow loo qaban doonaa xaflad caleemo saar
Farmaajo wuxu hore u soo qabtay jagada Ra'isal wasaarenimo waxaanu haystaa dhalashada dalka Maraykanka.
Wuxuu yiri: 'Waxaa jiro dalal si cad u sheegay hebel baan rabnaaye hala doorto, lacagtana waan ka daba keenaynaa'.
'Shacabka iyo dowladdu waa isku hal, shacabka iyo dowladd iswadataa cid walba way ka adkaan karaan', ayuu u sheegay baarlamaanka.
'Shabaabku waxay nooga raynayaan waa shacabka' ayuu yiriFarmaajo oo baarlamaanka weydiisanayay in la doorto.
Madaxweynaha la doortay, khudbadiisa wuxu ku sheegay in uu billaabi doono dib u heshiisiinta isagoo sheegay in uu noqon doono "nabad doon" ee aanu noqon doonin "madaxweyne". Wuxuu qiray in dib u heshiisiinta ay tahay arrinta uu ahmiyadda koobaad siinayo.
Farmaajo wuxu sheegay in ay ka go'antahay dhamaystirka wada hadalladii dowladii hore la bilowday Somaliland.
Wuxuu sheegay in ay waajib tahay in looga hambalyeeyo xasiloonida siyaasadeed iyo horumarka maamul iyo dhaqaale ee ay sameeyeen oo ah "wax ay tahay in lagaga daydo".
Isagoo ka hadlayey habka uu u wajihi doono wada hadalladaa ayaa wuxu sheegay "waxaan bilaabi doonaa in aan dadkaa walaalaheen ah la fadhiisano wax alle wixii ay tabanayaanna si daacad ah aan ugala xaajoono".
Waxaanu sheegay in qof kasta oo hantida qaranka ku takri fala "xabsi dheer loo diri doono".
Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa aaminsan inuu Farmaajo ka dhabeyn doono dhammaan ballamaha uu qaaday, haddii uu u sameeyo arrimihii uu shacabka ku kasbaday xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa.
Muuqaal Daawo: Dibedbaxyo lagu taageerayo yahay Farmaajo